HR3 – Hampton Roads Refugee Relief ကို ပံ့ပိုးပါ။
Facebook က Instagram ကို linkedin-in ကို စာအိတ် ဖုန်းနံပါတ်
HR3 ကို ပံ့ပိုးပါ။
အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် သင်၏လှူဒါန်းငွေများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ သေးသည်ဖြစ်စေ တစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ၊ ဆက်တိုက်ဖြစ်စေ သင်၏ငွေကြေးလှူဒါန်းမှုများကို အလွန်တန်ဖိုးထားကြပြီး Hampton Roads ရှိ ဒုက္ခသည်အသိုက်အဝန်းအတွက် တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်သည်။
Hampton Roads တစ်လျှောက်ရှိ ဒုက္ခသည်များ၏ဘဝတွင် HR3 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ သင့်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်မပါဘဲ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များပိုမိုရရှိရန် အောက်ပါဖောင်ကိုဖြည့်ပေးသည့်အတွက် ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
HR3 ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ရန် သင်၏ စေ့ဆော်မှုကား အဘယ်နည်း။
အကယ်၍ သင်သည် သီးခြား စေတနာ့ဝန်ထမ်း လှုပ်ရှားမှုများကို စိတ်ပါဝင်စားပါက ၎င်းတို့ကို အောက်တွင် စာရင်းပြုစုပါ။
ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာတွင် အဆင်ပြေစေမည့် မည်သည့်ဘာသာစကားများ (အင်္ဂလိပ်မှလွဲ၍) စာရင်းပြုစုပါ-
အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့် သင်ကြားခြင်း/လုပ်ဆောင်ခြင်း အတွေ့အကြုံရှိပါသလား။
သင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြလိုသည့် အခြားအရာများ ရှိပါသလား။
သင့်ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်များကို လှူဒါန်းပါ။
သင်သည် Hampton Roads Refugee Relief ကိုပံ့ပိုးရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် အရည်အချင်းများကို လှူဒါန်းလိုသော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် အလွတ်သတင်းထောက်တစ်ဦးလား။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဖောင်ကိုဖြည့်ပြီး HR3 အဖွဲ့မှ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင့်ထံ မကြာမီ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ လှူမလား? ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိလိုအပ်ချက်စာရင်းအတွက် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ပုခက် (လက်ရှိဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်)
အဝတ်အထည်များ (လှူဒါန်းမှုအဖွဲ့အစည်း/ သိုလှောင်ရန်အတွက်)
သတိပြုရန်- အိမ်သုံးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုသည် ချိန်းဆိုမှုဖြင့်သာ လှူဒါန်းပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါဖောင်ကိုဖြည့်ပြီး HR3 အဖွဲ့မှ တစ်စုံတစ်ဦးသည် သင့်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းရန် အချိန်ကို စီစဉ်ပေးပါမည်။
မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်များကို လှူဒါန်းလိုသနည်း။
ပရိုဘိုနို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်လုပ်ငန်းရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ကမ်းလှမ်းချင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်ကမ်းလှမ်းလိုသောအရင်းအမြစ်များကို ဖော်ပြပါ။
(ဥပမာ- အလှူငွေသယ်ယူရန်အတွက် ရွေ့လျားကားများ)
သင်လှူဒါန်းလိုသော အခြားကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်များကို ဖော်ပြပါ။
အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ လှူမလား? ကျေးဇူးပြု၍ အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ "လက်ရှိလိုအပ်ချက်များ" စာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
Hampton Roads ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး
763 J. Clyde Morris Boulevard၊ Suite 1A
Newport သတင်း၊ VA 23601
© 2022 Hampton Roads ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ သင့်ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ပါ။